Thwebula Camfrog 6.14.584 – Windows – Vessoft
Camfrog – isofthiwe yakhelwe for izwi futhi amakholi wevidiyo emhlabeni wonke. Isofthiwe isekela ividiyo nokukhulumisana ngokulungiswa high, ithumela imiyalezo kanye namafayela zamasayizi ahlukahlukeneko. Camfrog ikuvumela ukuba ahlele umbhalo nevidiyo nge inqwaba interlocutors. Isofthiwe kwenza ukuba bathumele izipho virtual, SMS futhi wenze amakholi ngamazinga aphansi. Futhi Camfrog ikuvumela ukuba ukuvumelanisa akhawunti yakho Facebook ukuxhumana nabangani.
Voice namakholi video emhlabeni wonke
Yakha emakamelweni enu siqu lengxoxo
Ekuhlelweni Xoxa ngevidiyo nabantu abaningi
English, Français, Deutsch, 中文... Skype 7.30.73.105
English, Українська, Español, Deutsch... Magic Camera 8.8.5
English, Afrikaans, Українська, Français... Reaper 5.311